I-8.1 Umbhalo kumgca - Geofumed
I-8.1 Umbhalo kumgca
Kwiimeko ezininzi, izichazi zomzobo ziquka igama elinye okanye amabini. Yinto eqhelekileyo ukubona kwizicwangciso zezakhiwo, umzekelo, amagama anjenge- "Khitshi" okanye «uMntla weFreythi». Kwiimeko ezinje, okubhaliweyo kumgca kulula ukuyila nokufumana. Ukuze ufumane oko, sinokusebenzisa "" Umbhalo "umyalelo okanye iqhosha elihambelanayo kwi" Umbhalo "iqela le" Annotate "tab. Ngokwenza njalo, iwindow yelayini yokuyalela isicela ukuba sichaze inxibelelaniso yofakelo lombhalo. Qaphela kwakhona ukuba sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo: «Jikisa [kunye] neTayitile», esiza kuxoxa ngayo kamva. Okwangoku, kufuneka songeze ukuba kufuneka sibonise ukuphakama kunye ne-angle yokuthambekisa isicatshulwa. Iidigri zeZero zisinika umbhalo othe tyaba kwaye, kwakhona, iidigri ezakhayo ziya ngokubala. Okokugqibela, sinokubhala isicatshulwa sethu.
Njengoko ubona, ekugqibeleni kokubhala umgca wokubhaliweyo singacinezela «ENTER», evumela i-Autocad ukuba ibhale omnye umgca wokubhaliweyo kumgca olandelayo, kodwa loo tekisi intsha iya kuba yinto ezimeleyo yomgca wokuqala obhaliweyo. Kwanangaphambi kokubhala lo mbhalo mtsha, singachaza ngemouse indawo entsha yokufakela kwiscreen.
Inketho ye "jUstificación" kwiwindows yomyalelo isivumela ukuba sikhethe umxholo wombhalo oya kuhambelana nenqaku lokufakelwa. Ngamanye amagama, ngentsingiselo, inqaku lesicatshulwa liyikona lasekhohlo lesiseko sencwadi yokuqala, kodwa ukuba sikhetha nayiphi na enye indlela yokucacisa, isicatshulwa "siya kuvunyelwa" ngokusekwe kuyo ngokubhekisele kwinqanaba ukufakelwa Amanqaku okufakwa kwesicatshulwa ngolu hlobo lulandelayo:
Yeyiphi ngokucacileyo ehambelana nokukhetho olulandelayo xa sikhetha "jUkanisa."
Mhlawumbi usoloko usebenzisa i isizathu ekhohlo hlamusela okubhaliweyo yomgca ebukele kwindawo yokufaka (ekugqibeleni cinga ukuba izinto isicatshulwa umgca unako ukuhamba lula, njengokuba siza kubona kwizahluko eyayinikelwe izinto ukuhlela) . Kodwa ukuba ufuna ukuchaneka malunga nendawo yombhalo, ngoko kufuneka ukwazi kwaye usebenzise ezi zikhetho.
Post edlulileyo«Edlulileyo ISAHLUKO 8: TEXT
Post Next Imihlaba ye-8.1.1 kwisicatshulwaOkulandelayo "